Firmin'ny fiara sy fitaovana hafa | August 2019
Ahoana no hanaisotra ny tenimiafina rehefa bootana ordinatera miaraka amin'ny kaonty Microsoft amin'ny Windows 8
Editor Ny Choice August 25,2019
Tena Firmin'ny fiara sy fitaovana hafa
Ahoana ny famoronana ny smartphone Fly Fly IQ445 GENIUS
Ny ankamaroan'ny tompon'ny smartphone Fly IQ445 Genius farafaharatsiny indray no nieritreritra na farafaharatsiny nahare momba ny mety hisoloana ny Android OS eo amin'ny fitaovana mba hamerenana indray ny fahaiza-manaony, hampivelatra ny fahafaha-miasa, hampidiriny ny fanatsarana ny rindrambaiko. Ity lahatsoratra ity dia manolotra anao amin'ny fomba fijery ny fitaovana sy ny fomba fampiroboroboana ny modely voatondro izay azo ampiasaina amin'ny olon-drehetra, anisan'izany ireo tsy manana traikefa amin'ny resaka fiasa amin'ny rindrambaikon'ny fitaovana finday, ataon'ny mpampiasa.
Ahoana no fomba hamerenana ireo fitaovana Android alohan'ny hamelezana
Mpisera maro amin'ny ordinatera Android no mahafantatra fa ny fanandramana amin'ny fikirakirana, fametrahana ireo fanampiana sy fanamafisana samihafa dia matetika mitarika amin'ny tsy fahombiazan'ny fitaovana, izay azo alaina amin'ny fametrahana ny rafitra madio, ary ity dingana ity dia midika ho fanadiovana tanteraka ny fampahalalana rehetra avy amin'ny fahatsiarovana.
Firminware sy ny fanamboarana router ASUS RT-N12 VP (B1)
Ny router dia manatanteraka ny asany amin'ny fifandraisana amin'ny singa roa: fitaovana sy rindrambaiko. Ary raha tsy azo atao ny manelingelina ny môtika ara-teknika amin'ny fitaovana ampiasain'ny mpampiasa tsy tapaka, dia mety tsara sy tsy maintsy ampiasaina amin'ny tompon'ny router amin'ny fomba mahaleo ny orinasa.
Ny mpamokatra smartphones sy fitaovana maro hafa Xiaomi dia fantatry ny mpankafy rehetra amin'ny fitaovana Android androany. Maro no mahafantatra fa ny diabe nandresy tamin'ny fahombiazan'i Xiaomi dia tsy nanomboka tamin'ny famokarana fitaovana nandanjalanja, fa tamin'ny fampivelarana ny tambajotra Android MIUI. Efa ela be no lasa nalaza ny fantsom-panafody, mbola miangavy mafy ireo vahinin'ny vahaolana manokana amin'ny fampiasana MIUI ho OS amin'ny smartphones sy tablette avy amin'ny mpamokatra samihafa.
Firminware smartphone Meizu M2 Mini
Ny ankabeazan'ny smartphones Samsung dia miavaka amin'ny fiainana lava be noho ny kalitao avo lenta amin'ny fitaovana ampiasain'ny mpamokatra. Na dia efa taona maromaro aza ny fandidiana, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ireo fitaovana dia mijanona ho ara-teknika, ny sasany amin'ireo fitarainana avy amin'ny mpampiasa dia mety ho vokatry ny rindrambaiko ihany.
Mamono sy mamerina indray ny smartphone HTC Desire 516 Dual Sim
HTC Desire 516 Dual Sim dia smartphone iray izay, tahaka ireo fitaovana maro hafa amin'ny Android, dia mety hiparitaka amin'ny fomba maro. Ny fametrahana rindrambaiko ho an'ny rafitra dia ilaina iray tsy dia fahita firy loatra eo amin'ny tompon'ilay modely voatanisa. Ny fanodikodinana toy izany dia ahafahana mamela ny "famelomana" ny programa amin'ny fomba mahomby sy amin'ny fomba mahomby ary mahomby, ary koa hamerenana ny fahombiazan'ny vokatra very noho ny tsy fahombiazana sy ny fahadisoana.
Firminware smartphone Meizu M3 Mini
Mametraka mpamily ho an'ny orinasa Android
Manomboka ny fikirakirana ny ordinateur android, voalohany dia mila mikarakara ny fomba fiomanana. Izany dia mamela ny dingana hanoratana ny rindrambaiko ilaina amin'ny rindrankajy haingana sy haingana araka izay tratra, ary koa hanafoanana ny fahadisoana izay hampiditra fijaliana. Iray amin'ireo dingana manan-danja indrindra ny fiasa amin'ny rindrankajy Android mpitsikera amin'ny alalan'ny programa Windows manokana dia ny fametrahana ny mpamily "firmware".
Firminware android ny Samsung amin'ny alàlan'ny programa Odin
Na dia eo aza ny avo lenta amin'ny fahamendrehana amin'ny fitaovana Android novokarin'ny mpitarika iray amin'ny tsena iraisam-pirenena ho an'ny smartphones sy ny solosaina tabilao - Samsung, dia matetika no gaga ny mpampiasa ny mety hisian'ny fitaovana. Ho an'ireo fitaovana Android samihafa, ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny fanodinana sy ny famerenana rindrambaiko dia ny programa Odin.
Firmware ho an'ireo fitaovana Android mifototra amin'ny MTK amin'ny SP FlashTool
Ny sehatra fiadian-kevitry ny MTK ho fototry ny fananganana smartphones maoderina, solosaina takelaka sy fitaovana hafa dia nanjary niely be. Miaraka amin'ny karazana fitaovana samihafa, ny mpisera dia afaka misafidy amin'ny karazan-tsivana ao amin'ny Android OS - ny isan'ireo tontonana ofisialy sy custom custom ho an'ny malaza MTK dia mety hahatratra ampolony maromaro!
Firminware smartphone Xiaomi Redmi 3 (PRO)
Firmware sy fanamboarana router an'ny TP-Link TL-WR841N
Ny fahombiazan'ny router, sy ny toetrany ary ny toetry ny lahasa azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa, dia voafaritra fa tsy amin'ny fitaovana enti-miasa, fa koa amin'ny fikandrana (fikandrana) napetraka ao amin'ny fitaovana. Ho an'ny kely kokoa noho ny amin'ny fitaovana hafa, fa mbola ny rindrambaiko amin'ny ampahany amin'ny router dia mitaky fikojakojana, ary indraindray manalefaka rehefa tsy fahombiazana.
Firmin-tech smartphone Xiaomi Mi4c
Ny smartphone smartphone Xiaomi Mi4c, navoaka tamin'ny faran'ny taona 2015, noho ny toetrany ara-teknika avo lenta dia tolotra tsara tarehy anio. Mba hamahana tanteraka ny mety ho an'ny fitaovana, ny mpampiasa avy amin'ny firenentsika dia tsy maintsy manamboatra ny orinasa MIUI eo an-toerana na vahaolana manokana.
Lenovo A6010 rindrankajy smartphone
Firminware ASUS ZenFone 2 ZE551ML
Ny ASUS smartphones dia mendrika tokoa ny manana fangatahana avo lenta amin'ny mpividy amin'ny fitaovana maoderina, tafiditra amin'izany ny vokatry ny fahombiazan'ny ankamaroan'ny asany. Amin'ity tranga ity, any amin'ny fitaovana rehetra, dia afaka mahita ny fahadisoana ianao, indrindra amin'ny ampahany rindrambaiko. Ny lahatsoratra dia hiresaka momba ny iray amin'ireo vahaolana malaza amin'ny smartphones an'ny mpanamboatra an'i Taiwan ASUS - ny model ZenFone 2 ZE551ML.
Upgrade firmware amin'ny router ZyXEL Keenetic Lite
Ny router ZyXel Keenetic, anisan'izany ny modely Lite, dia malaza be amin'ny mpiserasera noho ny fidirana sy ny interface mahataka-davitra, izay ahafahana manavao ny orinasa tsy manana fahaizana manokana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hamaritra ny fomba amam-panazavana amin'ny fomba roa amin'ny antsipiriany izahay. Fitaovana fikirakirana ao amin'ny ZyXEL Keenetic Lite Ao amin'ny modely ZyXEL Keenetic samihafa, dia mitovy ny interface, izany no mahatonga ny fametrahana ny fanavaozana sy ny fanavaozana fikirakirana fikirakirana amin'ny fomba mitovy.
Firminware ho an'ny Lenovo IdeaPhone P780
Fitsipika momba ny fanoratana mailaka
Mametraka Debian amin'ny milina virtoaly VirtualBox
Inona ny endriky fampirantiana amin'ny Windows 7
RaidCall Error: FlashCtrl error [eNotInstallFlash]
UltraISO: 121 diso rehefa manoratra amin'ny fitaovana
Ny programa sy ny fitaovana fanampiny ao amin'ny rafitra opera Ubuntu dia afaka aseho amin'ny alàlan'ny "Terminal" amin'ny alàlan'ny fidirana baiko, fa amin'ny alalan'ilay vahaolana ara-grafika tsotra - "Manager Manager". Ny fitaovana toy izany dia toa azo ampiharina amin'ny mpampiasa sasany, indrindra ireo izay tsy namaha ny konsole ary tsy dia manana fahasarotana amin'ny lahatsoratra rehetra tsy takatry ny saina. Read More
Ny fomba hiverenana PDF amin'ny Word (DOC sy DOCX)
https://termotools.com mg.termotools.com © Firmin'ny fiara sy fitaovana hafa 2019